Kibba Itiyoophiyaatti sigigoo lafaa fi lolaan badii qaqqabsiise - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Ashenafi Tesfaye/FB
Naannoo Kibbaa, godina Guraagee, aanaa Misqaani fi gandoota ollaatti torban darbe rooba roobeen lafti sigigaatee yoo xiqqaate namoonni shan du'uun gabaafameera.
''Dura lolaatu lafa dhodhoosaa ture. Lolaafi roobni erga caamee torban tokko ta'us, laftichi garuu dhohuunsaa hin dhaabbanne. Manneetiin lamas liqimfamaniiru,'' jechuun kan nuuf himan jiraataaa aanaa Misqaan kan ta'an obbo Muhiddiin Mahammadi.
Taateen balaa uumamaa rooba cimaa fi lolaa makate akkasii naannichatti irra deddebi'ee mudachaa jiraachuusaa jiraattonni ni dubbatu.
Iddoon miidhaan itti qaqqabe Zabiidaar kan jedhame waamamuufi dhiha qarqara sulula qiinxamaa Itiyoophiyaatti argamuunsaa balaan sigigoo lafaa irra deddebi'ee akka uumamu sababii ta'uu danada'a jechuun kan dubbatan qorataa keessa-lafaa kan ta'an obbo Miiftaah Shamsuuti.
Wayita samiin gungumutti balaan dhalatu kun lafa raasee sigigoo uumuunsaa kun yeroo sadaffaaf akka ta'e dubbatu.
Balaan kuni torbee darbe keessa dhohinsa lafaa qaqqabsiiseen lubbuu namaa galaafateee qabeenyas barbadesseera.
Gaazexeessaan biiroo kominikeeshinii aanaa Misqaan, obbo Reediwaan Kadir akka jedhanitti gandooti 16 tahan balaa kanaan miidhaan irra gaheera.
Goodayyaa suuraa Karaa guddaa dhohe
''Sigigoo lafaa naannoo gaara Zabiidaaritti qaqqabeen miseensonni maatii tokkoo achi buuteen isaanii dhabameera. Namooti muraasni immoo lafa qotuun jalaa bahaniiru. Magaalaa Buttaajiraatti namni ijoollee laga guute keessaa baraaruuf jedhe tokkos du'eera,'' namoonni shan ta'an ammoo lubbuu isaanii dhabaniiru. jechuun nutti himaniiru
Obbo Reediwaan lolaafi sigigoon kuni oomisha midhaaniifi manneen jireenyaa wayita mancaasu jiraatootas akka buqqa'an godheera.
Balaan uumamaa kuni karaa guddaa Finfinnee irraa ka'ee Arbaaminci geessu bakka lamattii baasurra kan ka'e imaltoonni karaa geeddaruuf akka dirqaman BBC n jiraattota irraa odeefateera.
Bulchaan aanaa Misqaan akka jedhanitti immoo sababii lolaa kanaan namoonni 476 tahan kan buqqa'an yoo ta'u, isaanii iddootti deebisuuf hojjechaa jirra jedhaniiru.
Haalli namoota dhohinsaan buqqa'an 145 yaaddessaa akka tahe himanii, miidhaan qabeenyarratti qaqqabe walumaagalatti hanga miliyoona lama ta'uu ni malas jedhaniiru.
Maatiin balaan irra gahee muraasni gargaarsa bulchiinsa naannichaafi Fannoo diimaan da'oo yeroof qophaa'eef keessa kan boqotan ta'uu himuun, furmaati nama baasu garuu jiraattota gara iddoo biraatti qubachiisuu ta'uu obboo Reediwaan dubbataniiru.
Lolaa kanaan walqabatee sigigoo lafaa dabalataan ta'u mala jechuun kan yaada'an obbo Miiftaa Shaamsuu tarkaanfii of-eeggannoo dursamee fudhatamurratti waligalu.
''Namoonni naannoo sana jiraatan haal duree tokko malee akka gadhiisan godhamu qabu. Jiraattonni iddoo foyyaa'atti da'atanii furmaata fiixaan bahumsa qabu akka argatan gochuun barabaachisa. Jaarmiyaaleen naannoofi federaalaa rakkoo kana to'achuuf gahee isaanii akka bahanis gaafataniiru.''
Haa ta'u malee qonnaan bultooti naannchi iddoo isaanii gadhiisuuf fedhii akka hin qabne himaniiru.